Dhageyso: Sheekh Fu'aad Oo Ka Hadlay Loolanka Melleteri ee Ka Socda Dalka Soomaaliya.
Sunday April 16, 2017 - 09:45:12 in Wararka by Super Admin
Isagoo Fagaare kuyaal degmada Salagle kula hadlayay boqolaal qof oo shacab ayuu Sheekh Fu'aad Max'med Khalaf ka hadlay duullaanka ay ciidamada shisheeye kusoo qaadeen Dalka Soomaaliya.
Sheekh Fu'aad oo katirsan Saraakiisha Xarakada Al Shabaab ayaa sheegay in duullaanka lagusoo qaaday Soomaaliya uu marayo marxalad fashil ah islamarkaana shacabka Soomaaliyeed looga baahanyahay in ay isbarbar taagaan Mujaahidiinta.
Wuxuu soo hadal qaaday goodiskii ka yimid Donald Trump Hoggaamiyaha Cunsuriga Mareykanka ee ahaa in uu aag dagaal ka sameynayo dalka Soomaaliya gaar ahaan gobollada ay maamusho Xarakada Al Shabaab wuxuuna qorshahaas ku tilmaamay mid qar iska xoornimo ah.
Sheekh Fu'aad ayaa adkeeyay in marxaladdan ay dib ugurasho bilaabeen ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa Itoobiya kadib dhiig bax sanado qaatay oo ay kala kulmeen dagaalka Soomaaliya wuxuuna rajeeyay in waqtiyada soo socda ay guulo kasoo bidhaami doonaan gobollada dhaca Koonfurta iyo bartamaha dalka.
Halkan ka degso Muxaadarada Sheekh Fu'aad MP3